Onye na -emepụta ihe na onye na -ebubata ihe na -emepụta onwe onye China na -eme onwe ya Daxin
Platform Ibu Ibu Ibu Ibu Ebube nke China Daxlifter
Ebuli Igwe Ọkụ eletrik zuru oke
Onweghi Mgbapụta Obere Scissor Lift
Igwe Ọkwọ ụgbọ ala Scissor Lift
Otu Mast Aluminom Aerial Work Platform
Nhazi elu dị elu Platform Work Aerial Aluminium
Ọmarịcha mmụba Telescopic na -akpali akpali
Ụdị Mkpa e ji akwagharị akwagharị
Ebuli Ọrụ ụgbọ ala bulie anọ Daxlifter
Ntinye ụgbọ ala Scissor Carft na -arụ ọrụ nke abụọ
Obere ụgbọ ala na -ebuli ebuli elu ebili Daxlifter
Ụlọ ahịa ụlọ ahịa
Igwe ihe mkpuchi ikuku
Obere obere mkpisi mkpisi mkpị na-adị obere obere radius na-atụgharị maka oghere ọrụ siri ike, ọ dị nfe, nke pụtara na enwere ike iji ya na ala nwere oke ibu, ikpo okwu sara mbara nke ukwuu ijide mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ, enwere ike iji ya ma n'ime ụlọ na n'èzí.
Oke nha nke ikpo okwu: Ogologo: 1170*600mm
Ike nso: 300kg
Ogologo oke Max Platform: 3m ~ 3.9m
Mbupu LCL n'efu dị n'ọdụ ụgbọ mmiri ụfọdụ
Atụmatụ & Nhazi
Max. Ịdị elu Platform (mm)
Max. Arụ ọrụ Elu (mm)
Ebuli ikike etinyere (n'arọ)
Nwechapụ Ground (mm)
Size Platform (mm)
Ogwe nkwagharị (mm)
Nkeji ogologo okirikiri (mm)
Max. Drive peed (ebuliri ikpo okwu)
Max. Ọgba mbanye (Platform ala)
Ịgba ọsọ/ịda ada (SEC)
Max. Ọkwa njem (%)
Ndị na -anya ụgbọala (V/KW)
Igwe na -ebuli elu (V/KW)
Max kwere na -arụ ọrụ n'akuku
N'ozuzu Ogologo (mm)
N'ozuzu Obosara (mm)
N'ozuzu Elu (mm)
N'ozuzu Net arọ (n'arọ)
Ụlọ ọrụ mgbapụta hydraulic na moto
Ihe ngosi batrị na chaja nkwụnye
Ogwe njikwa na Chassis
Njikwa njikwa na Platform
Nke gara aga: Obere mkpanaka mkpanaka mkpanaka
Osote: Ebuli Hydraulic Drive Scissor Lift
Atụmatụ & Uru:
Sistemụ ịnya ụgbọ ala maka ịmegharị saịtị site n'elu ikpo okwu (stowed)
Mgbapụ ụgbọ elu mpịakọta na-edobe ihe niile ịchọrọ n'aka aka gị (nhọrọ)
Taya na-enweghị akara
Isi iyi ọkụ - 24V (batrị 6V AH anọ)
Dabara n'ọnụ ụzọ dị warara na warawara
Akụkụ kọmpat maka nchekwa nke ọma.
Sistemụ njikwa ụgbọ ala eletrik
Electric moto na haịdrọlik mgbapụta ọdụ
Batrị na -adịgide adịgide
Chaja batrị nwere ọgụgụ isi
Njikwa njikwa ergonomics
Akwa ike hydraulic cylinder
Obere igwe na-ebugharị scissor bụ kọmpat na obere radius na-atụgharị maka oghere ọrụ siri ike.Ọ dị nfe, pụtara na enwere ike iji ya na ala nwere mmetụta dị arọ, ikpo okwu sara mbara nke ukwuu ijide mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ma enwere ike iji ya ma n'ime ụlọ na n'èzí.Ọ nwere ikike ịdị arọ 300KG ma nwee ike iburu ma ndị na -arụ ọrụ na ndị na -arụ ọrụ.
Ọzọkwa, enwere ike ịkwọ ya n'ogo zuru oke yana o nwere sistemụ nchekwa oghere, nke ga-enye nkwado ma ọ bụrụ na a na-ebugharị ya n'elu ebe na-adịghị ahụkebe. Obere mkpali mkpali onwe ya nwere draịva eletriki dị mma, na-enye ya ohere ịgba ọsọ karịa mbuli elu ọzọ na klaasị ya. Igwe a na -ebuli elu nwere ọnụ ahịa ọrụ dị ala, n'ihi na ọ nweghị ụdọ, eriri ma ọ bụ rollers na mast ya.
Mini Scissor Lift na-akwalite onwe ya na-adọta ihe nrụpụta pụrụ iche. A kwadebere “drawer” abụọ n'akụkụ aka nri na aka ekpe nke ihe ahụ na -ebuli scissor. A na -etinye ọdụ mgbapụta hydraulic na moto eletrik n'otu drawer. A na -etinye batrị na chaja n'ime drawer nke ọzọ. Ọdịdị pụrụ iche dị otú ahụ na -eme ka ọ dị mfe idobe ya
Abụọ esetịpụrụ sistemụ njikwa elu. Otu nọ n'akụkụ ahụ dị ala na nke ọzọ dị n'elu ikpo okwu. Njikwa ọrụ ergonomics n'elu ikpo okwu na -ejikwa ngagharị niile nke mkpali mkpisi.
N'ihi nke a, obere mkpị mkpisi akpaaka nke onwe na -akwalite arụmọrụ ndị ahịa nke ọma.
keikuku ebuli soplaya
Onye na -ebubata ikuku ikuku
Ndị na -ebubata igwe ikuku
igwe na -ebuli soplaya
omenala mkpa mkpa
onye na -ebubata mmanụ dizel scissor
Hydraulic Scissor Lift soplaya
Mobile Scissor Lift soplaya
Propelled Mini Scissor ebuli
Rough Terrain Scissor Lift soplaya
Scissor Lift soplaya
onwe -akpụ akpụ mkpa inwe soplaya
Onye na -ebuputa Scissor Lift soplaya